Ikamelo elivulekile - Isethingi yezwe i-Mnthly Discount - I-Airbnb
Ikamelo elivulekile - Isethingi yezwe i-Mnthly Discount
Hollywood, Maryland, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Mary
Izaphulelo zanyanga zonke. Umbhede omkhulu, ubhavu wangasese, indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, usofa, ideski, i-TV ene-Netflix ne-Amazon Fire Stick, umshini wokuwasha/ukomisa, Ikhishi, amabhodwe, amapani, nezitsha zesiliva.
Isethingi yangasese emaphandleni amahle aseNingizimu Maryland. Imizuzu engu-5 ukusuka e-Leonardtown, ezitolo, ezitolo zokuthenga ukudla, kanye ne-St Mary 's Hospital. Imizuzu engu-20 ukusuka e-Cove Point, i-Solomon' s ne-Pax River Naval Air Station.
Ikamelo lokulala elakhelwe ngaphansi elinekamelo lokulala endaweni yezwe ngokuphelele.
-Ikamelo lokulala elinendawo evulekile yokulula
ongu-King -Ubhavu wangasese oneshawa/ubhavu
-I-TV ye-Large nge-Satellite -Walk ku-Closet
-Kitchen nge-Microwave, usinki, ifriji elikhulu, izinto zesiliva, amabhodwe namapani
-Umshini Wokomisa Nokomisa Egunjini
Lezinsiza Ezisemgangathweni - I-inthanethi Esezingeni Eliphezulu ne-Netflix kufakiwe
- Asinazo izilwane ezifuywayo endlini.
- Sinezilwane ezifuywayo zangaphandle:
2) Ama-Turkeys, ama-Chickens, nama-Ducks ahlala egcekeni le-hen
Indawo enokuthula, enokuthula endaweni yasemaphandleni. Kulungele ukuphumula nokungcebeleka nemvelo, kodwa futhi kuseduze ngokwanele nedolobha, izitolo, izitolo, izitolo zokuthenga ukudla, neziteshi zegesi ukuze uphume uma ufuna..
Indawo yesivakashi ihlukile ngokuphelele endaweni yokuhlala yombungazi. Siyatholakala ukuphendula noma yimiphi imibuzo futhi sinikeze ukusikisela kwezinto ongazenza nezindawo zokudla endaweni. Izivakashi zinendawo yazo yokungena, ukuze zize zihambe ngokuthanda kwazo.
Indawo yesivakashi ihlukile ngokuphelele endaweni yokuhlala yombungazi. Siyatholakala ukuphendula noma yimiphi imibuzo futhi sinikeze ukusikisela kwezinto ongazenza nezindawo zokud…